Al-Shabaab oo si kulul uga hadashay Murashaxnimada Roobow
MUQDISHO, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ayaa war culus kasoo saartey murashaxnimada Mukhtaar Roobow Cali [Abuu Mansuur], kaasoo u taagan jagada madaxwaynaha Koonfur Galbeed.
Murashaxnimadda Roobow oo markii hore ay shaki gashay markii dowladdu kasoo saartay bayaan culus ayaa ku adkeystay inaanu bedali doonin mowqifkiisa, taasi oo ku qasabtey dowladda inay ufasaxdo.
War qoraal ah oo kasoo baxay kooxda xiriirka la leh Al-Qaacidda ayaa lagu sheegay in murashaxnimadiisa ay arkaan mid uu kaga leexday wadadii saxda ahayd ee Diinta iyaga oo ku tilmaamay "mid radiyey".
Shabaab waxay la barbardhig Roobow, Madaxwayne hore, Burhanuddin Rabbani, Ra'iisul Wasaare hore, Gulbuddin Hekmatyar iyo siyaasi Abdul Rasul Sayyaf, kuwaasi oo reer Afghanistan ah.
Dhamaan xubnahani waxay horey mid ahaan jireen kooxo Islaami ah, oo ka dagaalam wadankaan Qaarada Aasiya ku yaala, iyaga oo kolkii dambe isku bedalay siyaasiyiin xil-raadis ah.
Su'aasha is-waydiinta mudan waxay noqoneysaa maxay Al-Shabaab usoo qaadan wayday shaqsiyaadka Soomaalida ah ee iyaga horey uga mid ahaan kooxaha Jidaah aloosyaasha ah ee kadib siyaasiyiin isku bedalay.
Sikastaba, Mukhtaar Roobow oo mudadii uu kamid tirsanaa Al-Shabaab soo noqday Hogaamiye ku xigeen iyo Afhayeen ayaa ka baxay Urur sanado kahor isaga oo ku dhuumaaleysanayey tuulo ku dhow degmada Xudur ee gobolka Bakool.
Bishii August 2017 ayuu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya, isaga oo tibaaxay inuu ka baxay fekeradii ay aaminsaneed Al-Shabaab, inkasta oo uusan cafis waydiisan dhamaan dadkii uu dambiga ka galay mudadii uu ka tirsanaan kooxdaan.
Farmaajo oo magacaabay Garsooreyaal ka tirsan Maxkamadda Sare
War Saxaafaded 24.12.2018. 19:02
Magacaabistan ayaa kusoo beegmaysa xilli shacabka ay cabasho ka muujiyeen nidaamka cadaalladda.
Soomaliya 04.08.2018. 16:19
Banaanbax ka dhacay Afaafka hore ee Villa Somalia [SAWIRRO]
Soomaliya 09.04.2019. 13:37